トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Intsingiselo yemeko HIV kunye nendawo ngasemva ukubhula "Tower", iqabane iimvakalelo?
Ikhadi le "inqaba" 3500 yen kwintsingiselo
umsebenzi abaxeli-mathamsanqa kwindawo reverse sibizwa ngokuba Tower (Tower) ngendlela
IsiNgesi ukufumana apreyizali ezamahala "Tower" ludonga enkulu phambi iso oku kubonisa ukuba langutane. Xa eli khadi ephuma, ngenxa yokuba okulungileyo kulindeleke ukuba kukhokelela ukusilela ukuze ungaphumi uye kwakhona ukuzama, kuya kuba ngcono ukuba siphephe ukuba isigqibo ezibalulekileyo kwaye isigqibo eluthandweni.
umzekelo, Toka ukuba Zidumise uthando lwakhe ezingabuyekezekiyo, ezifana try wayebhekisela umtshato yaye ufuna ukwazi iimvakalelo zakhe uthandana nomntu othile, amanyathelo ekufuneka senze izigqibo ezibalulekileyo, ezifana ukutshintsha kwemali enkulu wekamva, eli xesha iya kakhulu ukuba akusebenzi.
Noko ke, ukuthetha iphumelele nokuba asenokulibazisa, ngenxa yokuba nakanjani na le nto, ngalo mzuzwana, makhe siqwalasele ngokunika up izinto oyicingayo ndize uzame umngeni ngaphandle kwetyala.
"kwinqaba" oko ifanele ukuba athetha indawo ezintle "Tower" kukuthi, bekuya kuba imeko yangoku waxinga, kumjikelo negative ukuba ninganqeni, enoba oko okanye ngempazamo ukufumana, Tachihadakari udonga enkulu okanye yimiqobo phambi kwamehlo, okanye uziva ukhathazekile ukuba unako ukwenza nantoni na ngokwayo, imele ukuba kudana ezifana ngokwam. Nantso uthando, buhlungu kakhulu okanye ngamazwi kunye nezenzo zakhe, njengoko anjalo yena uthandana, kusenokwenzeka ukuba kwenzeka wadlula naye.
kuba phambi kwakho into ebalulekileyo kukuba kuye, okanye nifuna fun na ngakumbi, lixesha nimfunayo into eyahlukileyo. Uyekile ukwenza bandikrokrele iimvakalelo zakhe kwimeko iimvakalelo zombini, abantu uthando ezingabuyekezekiyo ke kubhetele ukuyeka ukuba avume.
"inqaba" kwi ikhadi iimvakalelo elikhuselayo
kwindawo umva Kucingelwa ukuba lithetha "Tower", oko kuthetha ukuba kukho udonga enkulu kusondela phambi iliso Ewe, kodwa ukuba wena ngaphandle kwindawo reverse kunokuba kwindawo entle kukuba ukujika iwonga ukuvimbile enjalo Happo, oko kuthetha ukuba ukuhamba lwekamva entsha iqala.
isiphelo imeko esibuhlungu kakhulu ukuya kuyo, ukuze aye njani indlela elungileyo, ungafuna ukuvumela ngokwakhe kwemali.
ngothando, linyibilike buyadlula, kwaye ukungaqondi kunye naye, iimvakalelo zakhe ngumqondiso kwakhona ukuba babuyele ex yakho. Okanye babe nolwalamano oluhle, ezifana umgama ngalinye ezinye lize inyathelo ngakumbi, sinokulindela utshintsho kwi imeko onwabe.
yamkela ukuhamba imimiselo elikhulu enjalo, ngokuthi ngaphambi kokuqhubeka ngaphandle koloyiko yotshintsho, ungaya ukuvula imimiselo entsha ukutyelela ngokwakho. Xa kunjalo, ulilahle kude iimbono ezinjalo kunye ophila nayo de kube ngoko, makhe uzame ukwamkela phambi nobunyani iliso.